DAAWO: J/Land oo shaacisay xog ay horey u baahisay PTIMES, kuna dhawaaqday.
KISMAAYO(P-TIMES) – Madaxweyne kuxigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aden ayaa hoosta ka xariiqay xog ay horey baahisay Warsidaha Puntlandtimes, bartiisa Youtube-ka, taas oo ku wajahneyd arrimaha ku saabsan xarriga wasiirka Amniga ee maamulkaas Cabdirashiid Janan oo gacanta ugu jira dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Warsidaha ayaa ogaaday in Madaxweyne Farmaajo in uu sadex sharuudood ku xiray arrimaha ku wajahan sii deynta Cabdirashiid Janan ayna yihiin oo kaliya, waxyaabaha ay ku cafin karto dawladda Faderaalka, haddii kale uu xirnaan doono.
Madaxweyne kuxigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aden oo ay isku deegaan kasoo jeedaan wasiirka la xiray ayaa sheegay in ay dawladda Soomaaliya soo gudbisay sadex qodob oo ah kuwa aan marnaba ka fuli karin xagga Jubbaland, kuwaas oo kala ah.
Dawladda Soomaaliya, waxay doonaysaa in lagu soo wareejiyo ku dhawaad 1000 Askari iyo hubkood oo daacad u ahaa wasiir Janan, kuwaas oo katirsan ciidamada Daraawiishta ee Jubbaland.
In Wasiirka Amniga Jubbaland uu la shaqeeyo qorshaha dawladda Faderaalka ee kuwajahan deegaanada Jubbaland, uuna ka baaqsado xariirka wada shaqeynta ammaanka ah ee uu la leeyahay dawladda Kenya.
In siyaasiinta ka soo jeeda gobalka Gedo, gaar ahaana beesha Mareexaan ay iskaga baxaan Jubbaland oo ay cadeyaan in aysan aqoonsaneyn doorashadii dhawaan ka dhacday magaalada Kismaayo.
Sadexdan qodob oo ay horey u shaacisay PUNTLANDTIMES, waxay qeyb ka ahaayeen qorshaha dawladda Faderaalka ee kuwajahan arrimaha Jubbaland, maadaama ay Xukuumaddu ku fashilantay in ay faragalin ciidan u adeegsato doorashada Kismaayo, sidaas oo kalena ay soo saari weyday saaxiibadeedii xagga siyaasadda ee kusugnaa magaaladaas oo aan laheyn awood balaaran.
Guddi gaar ah oo ka socda Jubbaland oo ay ku jiraan odayaasha dhaqanka iyo Ganacsatada ayaa maalmihii u dambeeyey kulamo la yeeshay madaxda dawladda Faderaalka, gaar ahaana Madaxweynaha oo ay kala hadleen sidii loo sii deyn lahaa Wasiirka Amniga ee Jubbaland.
Xubno katirsan guddigan ayaa u sheegay PUNTLANDTIMES in talaabada ay qaaday dawladda Faderaalka Soomaaliya ay ka dhigan tahay mid ay ka leedahay dano siyaasadeed, isla markaasna arrimaha ka dhasha ay noqon karaan kuwa aan wanaagsaneyn, maadaama ficiladeedu ay yihiin kuwa aan sax aheyn.